Ma ogtahay Sida Ay Hormone-nada u Saameeyaan Masakaxdeena iyo Jirkeena? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor — February 22, 2020
Ma ogtahay Sida Ay Hormone-nada u Sameeyaan Masakaxdeena iyo Jirkeena?
Marka hore ma ogtahay in maskaxdaadu ay la xiriirto dhammaan jirkaaga? Maskaxdu waxay jirka u dirtaa dareero kiimiko ah oo la yiraahdo hoormoono, hoormoonadaas waxay si toos ah u saameeyaan jirka oo dhan waxay sare u qaadi karaan ama hoos u dhigi karaan tamarta jirka ku jirta dareenka, xaalada jir ahaaneed, iyo firfircoonida jirka qofka sida jinsiga, farxada, baabi’inta baruurta iwm.
Hoormoonadaas waxaa ka mid ah
Hoormoonkan waxaa la yiraahdaa hoormoonka farxadda ama hoormoonka dareenka waxa uu ka dhiga qofka mid faraxsan shaqo badan Tusaale: waxay saynisyahano tijaabo cilmi ah ku sameeyeen jiir waxay hor dhigeen cunto yar iyo cunto badan laakiin cuntada badan waxaa lagu deeyray deer gidaar dheer jiirka markuu ku badanyahay jirkiisa hoormoonka dopamine waxa uu raadsaday cuntadii badneen oo waxa uu ku dadaalay inuu ka boodo deerkii markaas waxaa la yiri waxaa ku badan jirkiisa hoormoonka dopamine oo awood dheeri ah siiyay.
Marna waxa uu aaday cuntadii yareed waxaa ku yar markan dopamine-ka. Dadka qaar waxay hoormoonka dopamine ka helaan cabista kafeega, shaaha, iyo waxyaabo xaaraan ah sida khamrada daroogada sigaarka waxaa dhacda in jirka la qabsado waxaas oo markuu helo jirka dopamine soo saaro.
Markuu dopamine-ku qofka ku bato waxaa haleelo nashaad badan iyo isbadal badan waxa uuna la yimaadaa dhaqdhaqaaq badan isbadal aan lagu aqoon.
Haduu ku yaraadana waxa haleelo daal wahsi iyo caajis badan fahmo darro. Cunnooyinka qaar ayaa laga helaa hoormoonkan dopamineka sida: hilibka digaaga kalluunka, subag buuraha , subagga looska, shukulaatada iyo digirta.
Waa hoormoonka farxadda badanaa waxa uu ka yimaadaa caloosha oo mindhicirada ayuu ku jiraa 90 % haddii dheef shiidkaagu caafimaad qabo waxaad heleysaa Serotonin faraxd aan la aqoon sababtii ay ku timid Serotonin haduu ku bato qofka waxa uu yeeshaa masakax badan fariidnimo iyo xifdin badan.
Mararka qaar markaad waxaad jeceshahay cuneyo waad muusootaa jeclaataa faraxdaa waxaa sababaya hoormoonka serotoninka. Haduu ku yaraado qofka serotoninka waxa ku dhaca caajis caro badan xanaaq aan la ogeen waxa uu yahay. Serotonin waxaa laga helaa cuntooyinka leh kaarbohaydaraytka sida: Muuska oo la cuno waxaa kaloo laga helaa hoormoonkan qorraxda iyo fallaaraheeda iyo vitamin D waa inaad ubaxdaa qorraxda si jirkaaga u helo serotonin.
Waa hoormoonka jaceylka haa gacaliso/ Gacaliye waa hoormoonka jaceelka jirkana waxa uu soo saaraa marka aad taabato qof un sida jaceelkaaga xaaskaaga seygaaaga waalidka saaxiibka ama qaraabada qof ka mid ah oo aad kugu weyn dadka leh lamaanaha caashaqa iyo asxaabta wanaagsan waxaa ku badan oxytocin-ka.
Markuu bato hoormoonkan oxytocinka waxa uu qofka ka ilaaliyaa duqnimada gaboowga waxa uu awood siiyaa tamarta jinisga waxa uu hoos u dhigaa cadaadiska dhiiga. Haduu qofka ku yaraado oxytoxin waxa uu noqdaa kali socod gaar-gaar daal farxad la’aan.
Dadka uu ku yaraado hoormoonkan oxytocin-ka waxay jecel yihiin kaligood inay ahaadaan asxaabta lama sheekeestaan way maqan yihiin mararka qaar dadka wax lama wadaagaan.
Si aad u hesho hoormoonka jaceelka ee oxytoxin ha laguu sameeyo masaaj daliig ama ha laguu riix riixo markaas waxa nafis helaaya jirkaaga murqaha ayaa raaxo qaadanaaya jirkana waxa uu soo saarayaa hoormoonka oxytocin.
Si kale oo aad ku heli karto oxytoxinka waa inaad hab siiso qof kugu qaali ah oo laabta geli salaan qof xushmad kaala dhaxeyso waxaad heleysaa hoormoonka oxytocinka.
Waa hoormoonka nadaamiya jirkeena waa kan kuu kala saara dareemada xiliyada qabowga kuleel iyo huurka iwm waa hoormoonka jirkeena u keena hurdada. Dadka uu ku yaraado melotoninka waxaa ku yar hurdada hurdada waxa yaraayee waqtiyadan casriga ah waxyaabaha la isticmaalo sida daawashada filimada waqtiga hurdada iyo isticmaalka taleefoonada gacanta tusaale markaad tagto sariirtaada jiifka oo aad furato takeefoonka gacanta qadkana furato oo dhex mushaaxdo baraja bulashada waxaad galeysaa muujad hirar ah waxaad is ogaan inaad dhaaftay waqtigii aad hurada heli laheed.
Melotoninka haduu ku yaraado jirka waxa uu keenaa xanuunada kala ah buurnida ,sokorowga,kansarka. Hadaba si aad u hesho melotonin wanaagsan iska dami taleefoonada iftiinkooda iyo waxwalba oo iftiin leh. Cunnooyinka laga helo hoormoonka melotoninka cun miraha la yiraahdo Cherry waxaa ku jira melotonin badan haku seexan dhar adag ama lugaha oo wax kaaga xiran yihiin ha seexan . Waayo jirkaaga oo ku xiran wax adag waqtiga hurdada wuxuu hoos u dhigaa hoormoinka melotoninka 60 % .
Waa hoormoonka la yiraahdo xanuun baabi’iyaha. Hoormoonkan endorphins waxa uu ka caawiyaa qof awooda dhiiranaanta waxa uu sii yaa geesinimo. Haduu yaraado waxaa qofka xanuunka kala goysyada walwalka ayaa ku hata qofka xanuunka uma adkeesan karo. Si aan u helo hoormoonka endorphinska waa inaan cunnaa cuntooyinka borotiinka badan sida:
Avocado qumbaha ama naarjiinka samee jimicsiga cun xogaa shukulaato ah.
Mararka qaar isku day inaad qososho ama raadso waxyaabaha majaajilada ah.
Waa hoormoon ay soo saaraan labada kelli ee qofka waxa uu ka hortagaa welwelka walbahaarka iyo stresska dadka ku dhaca. Marka uu qofka ku yaraado adrelinineka waxaa ku dhaca xasaasiyad wadno istaag iyo dhiig bax. Adrelininke oo bato qofka waxa uu siiyaa maskax badan wax walba oo loo qabtso si fiican.
Waa hoormoonka ka dhiga qofka inuu iskoontaroolo marka ay cabsida jirto. Tusaale marka uu cabsado ama wax soo weeraraan qofka wuu is dajiyaa ai uu uga gudbo xaalada uu ku jiro.
Dadka uu ku yaraado hoormoonkan norepinephrineka waxaa haleelo walwalka murugta waalida wareerka iyo waalida. Dhaqaatiirka waxay adeegsadaan hoormoonkan norepinephrine waqtiga qallinada si cabsida loo saaro dhiigana loo dajiyo. Si loo helo hoormoonkan norepinphrine dhaqaatiirta waxay ku talinayaan in la cuno cunatada laga helo badda aida kalluun iwm hilibbka digqaga ukunta digirta ,shukulaatada, muuska.
Waad ku mahadsantahay inaad akhrisy maqaalkan haddii aad horay u maqashay hoormoonada fadlan nala wadaag taladaada mahadsanid.
Tags: Ma ogtahay Sida Ay Hormone-nada u Sameeyaan Masakaxdeena iyo Jirkeena?
Next post Muhiimada Ay Uleedahay Bini'aadanka Innuu Helo Cunto Wanaagsan iyo Ammaan uu Ku Noolaado?
Previous post Ahmiyada Akhriska “Akhris la’aani waa aqoon la’aan”